Agaasimaha Hey’adda Socdaalka oo ka warbixiyay howlihii u qabsoomay | Jowhar Somali news Leader
Home News Agaasimaha Hey’adda Socdaalka oo ka warbixiyay howlihii u qabsoomay
Agaasimaha Hey’adda Socdaalka oo ka warbixiyay howlihii u qabsoomay
Agaasimaha Hey’adda Socdaalka iyo Jinsiyaddaha Dowladda Federaalka Soomaaliya G/Sare Maxamed Aadan Koofi ayaa faah faahin ka bixiyay howlaha hey’adda iyo wixii u qabsoomay, kaddib markii uu shalay si rasmi ah magaalada Dhuusamareeb uga furay Shirkii saddex bilaha ee Laamaha Hey’adda.
Agaasime Koofi ayaa sheegay in shaqooyin badan ka qabsoomeen sidii loo cayimi lahaa goobaha dalka laga soo geli karo, iyadoo amnigooda la adkeynayo sida garoomada diyaaradaha, dhulka iyo dekedaha.
“3-dii sano ee u dambeysay Hey’adda iyo Wasaaradda Amniga waxay ku mashquulsaneyd sidii Xuduudaha laga soo galo loo adkeyn lahaa amnigooda innagoo kaashaneyna dowlad goboleedyada, in xuduudaha la cayimo meelaha dalka laga soo geli karo, kadibna amnigooda la adkeeyo lagu dadaalo kuwa dhulka, garoomada diyaaradaha imaan karaan diyaaradaha caalamiga iyo dekedaha”ayuu yiri Agaasime Koofi.
Waxaa uu sheegay inay diyaariyeen illaa 15 bar xuduud oo dhulka ah, lana qalabeeyay, kuwaasoo loo qorsheeyay in si rasmi ah dalka looga soo geli karo, kaasoo mid ka mid ah uu dhismihiisa haatan socdo oo ah bar xuduudeedka ku yaalla deegaanka Kheydar ee Dowlad Goboleedka Galmudug oo dhaca Xadka Itoobiya.
“Hey’ad ahaan waxaan u hadalnaa guud ahaan dalka kama hadalno gobol gaar ah”ayuu yiri Agaasimaha Hey’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Dowladda Soomaaliya.
Dhinaca kale Agaasime Koofi ayaa sheegay inay fursad u heleen intii uu dalka xirnaa xilligii Coronaha in la tirakoobo ajaaniibta, isla markaana tirakoobkaas uu meel gabgabo ah marayo, isagoo xusay inay jiraan ajaaniib sharci darro dalka ku soo galay oo ay tahay howl u taalla oo ay ka wada shaqeynayaan Maamul Goboleedyada, iyo Hey’addaha Qaxootiga qaabilsan.
Hey’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Soomaaliya ayaa sanadihii u dambeeyay waday isku xirka howlaha laamaha Hey’adda ee dowlad goboleedyada, si wadashaqeynta ay u noqoto mid joogto ah.